Shaqooyinka amniga ee Dubai ee loogu talagalay Shaqo doonka
Miyaan u baahanahay fiiso loogu talagalay Dubai?
Shaqooyinka dubai ee Algerian
Shaqooyinka ammaanka ee Dubai
Shaqooyinka amniga gudaha Dubay iyo Imaaraadka Carabta. Mid ka mid ah mowduucyada ugu wanaagsan ee shaqo doonka. Haddii aad shaqo raadinayso. Shaqooyinka amniga ee Dubai laga yaabaa inay kuu tahay ikhtiyaar kuu fiican adiga. Dhanka kale, shirkaddayadu waxay rajeyneysaa inay ku caawiso. Waxaan nahay caawinta shaqaaleyaal ka socda adduunka oo dhan. Gaar ahaan Koonfurta Afrika iyo Hindisaha Hindiya ee Dubai iyo dadka u dhashay Pakistan oo cusub.
Markasta shirkadda Dubai City isaga oo gacan siinaya xirfad shaqo. Kooxdayada had iyo jeer hagid dadka shaqo doonka ah si looga helo shaqooyinka amniga ee UAE. Waxaan rajeyneynaa rajo, in kooxdayada takhasuska leh ay awood u yeelan karaan inay kaa caawiyaan inta lagu jiro raadinta shaqada. Magaalada Dubai, waxaad ku yeelan kartaa shirkado aad u xirfad badan. Helitaanka shaqooyinka shirkadaha sida G4S, Hawk Security, Cyber ​​Security iyo kuwa kale ee shirkadaha amniga Dubai.
Sidaas darteed maskaxda ku haysa, waa inaad hubisaa inaga hagid dhamaystiran oo ku saabsan sida loo helo shaqooyinka ammaanka ee Dubai. Shirkadeena waa isha ugu muhiimsan ee Shirkadaha meesha aad ka iibsanayso resume. Waqtigan xaadirka ah ee Dubai iyo Abu Dhabi, waxaa jira rikoodh Maamulayaal hodan ah waayo, ammaanka shaqo in Dubai?
Dabcan gudaha UAE waa a suuqyada sii kordhaya ee alaabta raaxada leh. Iyo iyada oo tan si gaar ah loogu imaanayo VIP persona. Sidoo kale, suuqa soo koraya ayaa loogu talagalay ganacsiga cusub. Sidoo kale shakhsiyadda VIP, iyo dadka ganacsiga heerka sare ah. Dadkaas oo dhami waxay u baahan yihiin ilaalin amaan.
Waxaa jira dhowr siyaabaha shaqo helida. Gaar ahaan haddii aan ku hageyno Imaaraadka Carabta. Dibad-baxayaasha cusub ee la shaqaalayn doono waxay filan karaan dhowr faa'iidooyin. Mid ka mid ah tusaalayaashu waa shaqo deggan Amaanka garoonka diyaaradaha ee Dubai. Markay shirkada cusub shaqaaleysiinayso shirkad ku taal Dubai. Waxay isaga siin doonaan a qandaraas fiican muddo dheer.
Maxaan ubaahanahay inaan noqdo ilaaliye ammaan?
Si aad u noqoto waardiye ammaan ah oo ku sugan Dubai. Waad ubaahantahay inaad dabcan xoogaa xoogaa ah oo ah aqoonsi iyo khibrad u leedahay. Waardiyeyaasha amniga ee oo doonaya inay ka shaqeeyaan Emirates. Waxba ma laha haddii ay yihiin maxaliga shaqaalaha ama ajnebiga ajnabiga ah. Dhammaantood waa inay tagaan oo ku aflaxaan koorso todobaad soconaya oo ku lug leh saacadaha 36 ee tababarka asaasiga ah iyo tababbarka. Akadeemiyadda Bilayska Dubai Dubai oo maamusha tallaabooyinka 3 ee shahaadada. Degmadu waxay markaa tijaabineysaa saddex imtixaan.
Afka markaad ubaahantahay inaad kajawaabto su'aalaha. Markaas ayaad qori doontaa imtixaanno iyo qiimeyn aqoon wax ku ool ah. Fiiri tilmaamaha sida loo gudbo imtixaanka halkan. Iyo haddii a musharrax guuleysta waxay ku aflaxayaan dhammaan imtixaanada 3. Ururka waxbarashada xirfadlaha ah ee magaalada Manchester iyo Guilds wuxuu xaqiiqo ku siin doonaa shahaadada ku siinaysa shahaadada aqoonsiga si aad u noqotid ilaalo amaan ah.
Barnaamijyada Thes 3 waxaa ku jira fasalada baaritaanka dembiga. Sida loo isticmaalo qalabka ujeeddada amniga. Sida loo maareeyo dab-demiska iyo sida loo baadho gawaarida iyo goobaha. On dhinaca dhinaca wanaagsan ee ammaanka shaqooyinka Dubai. In kasta oo aad baran doonto wax kabadan boqolkiiba 50 ee casharada waa kuwo wax ku ool ah. Markaa kaliya maaha oo waad ogaan doontaa cidda noqonka ilaaliyaha ah. Laakiin waxaad baran doontaa sida loogu sameeyo habka saxda ah.
Maxaan baran doonaa markaad maareyneyso xirfadda amniga?
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee musharraxiinta ay bartaan. Guud ahaan waa sida loo wada hadlo adeegga macaamiisha ayaa isku dhacaya shaqooyinka. Sababtoo ah dhamaadka wadada ma aha oo keliya maamulka inuu ogaado iyo sida loo ilaaliyo ballanqaadka. Waa inaad barataa sida loo maareeyo naftaada iyo kuwa kale xaalad degdeg ah. Waxyaabaha ay musharraxu bartaan marka ugu horreysa ayaa ah sida loo ilaaliyo goob dembi. Dhanka togan, taasi waxay cashar ka noqon doontaa Waaxaha Booliska. Ilaa iyo inta macluumaad la xiriira sida loo raadinayo dhisme ama gaari. Qofka ugu weyn ee wax barayaa waa Xarunta Caalamiga ah ee Ammaanka iyo Badbaadada Akadeemiyada Bilayska ee Dubai.
Koorsooyinka iyo fasalada oo idil waxaa bixiya saraakiisha sare ee booliska. Sidaas darteed waa inaad si habboon u dhaqmaysaa. Waxaa intaa dheer, waa inaad taqaanaa sida loola tacaalo ee shirkadaha Khaliijka. Shirkadaha qaar, tusaale ahaan, inay helaan barayaal ka socda Dowladaha kale iyo ilo ganacsi oo la xiriira sida Difaaca Madaniga. Dhanka togan, dhammaantood waxay ku dhici doonaan dugsiga tacliinta sare. Hawlaha amniga ee Dubai, dhowr shirkadood ayaa sameynaya koorsooyin tababar u gaar ah. Dhanka taban, imtixaanaadka waa in lagu qaataa akadeemiyada.
Barnaamijka tababarka oo dhan ayaa lagu soo bandhigay Dubai iyo Abu Dhabi ee 2005. Laakiin ugu weyn ganacsigu wuxuu bilaabay inuu socodsiiyo 2008. Illaa iyo hadda, akadeemiyadu waxay tababartay ku saabsan shaqaalaha amniga ee 57,000. Barnaamijka waxaa loo qaabeeyey qaabkan oo dadka intiisa badani ay u gudbin doonaan. Marka uma baahnid inaad wax badan ka walwasho taas. Isugeynta gudbinta ayaa ka badan 80%.
Waa maxay mushaharka ilaaliyaha ammaanka ee Dubai?
Runtii taasi waxay kuxirantahay,shaqooyinka qaarkood ayaa ah AED1,000 bishii ilaa 8,000. Ka dibna maskax ahaan, waa inaad fiirisaa dib u eegista shaqooyinka ilaaliyaha. Imaaraadka Imaaraadka Carabta, waxay ku xiran tahay waxa loo shaqeeyahaagu kula joogo. Dhismo noocee ah hadda ayaad maareyneysaa? Si aad u ogaato waxyaabo dheeraad ah, waxaad codsan kartaa dad kale oo ka socda Dubai iyo Abu Dhabi. Mid ka mid ah hababka ugu fiican ee lagu ogaan karo waa weydii dadka kale mushaharka. Sababtoo ah dhab ahaantii ma ogaan ilaa aad ka heli doonto dhab ah.
Helitaanka shaqooyinka amniga ee Dubai waqti ayey qaadaneysaa. Heerka shaqo raadinta waxay qaadataa waqti. Si kasta oo aad u dhib badan isku dayi doontaa. Xaaladaha badankood, waxay qaadan doontaa ku dhawaad ​​6months. Waqtiga aad ku bixi doonto Imaaraadka Carabta. Had iyo jeer waxay ku cayaartaa doorkaaga, gaar ahaan dadka ajnabiga ah ee dibedda ku nool.
Adigoo ah Ilaaliyaha Amniga, waxaad filan kartaa mushahar aasaasi ah. Dhanka kale adiga oo khibradaada fiican leh, waxaad maamuli kartaa mushahar aad u wanaagsan. Adigoo ah ilaaliyaha amniga gaarka ah ee VIP, waxaad maamuli kartaa wax ka badan 550 ilaa 1,500 AED maalin. Dhinaca togan, uma baahnid si loo maareeyo shahaadooyinka MBA.
Sidee loo heli karaa banaanbax nabadeed oo Dubai ah?
Dhowr shirkadood ayaa hadda shaqaaleysanaya Dubai. Xaqiiq ahaan, annaga Shirkadda waxay shaqooyin ka heli kartaa Dubai iyo Abu Dhabi. Gaar ahaan kormeerayaasha albaabada iyo kaaliyeyaasha amniga VIP. Guud ahaan waxaad ku hadli kartaa Abu Dhabi iyo Dubai waad awoodi kartaan raadso shirkado badan oo siinaya fursadaha saxda ah dadka saxda ah. The Sanadahan soo socda waxay muujinayaan koror ballaadhan ee suuqa ammaanka ee Bariga Dhexe.
Dhanka togan, qaar badan Shaqooyinka banaan ee shaqadu waxay bilaabanayaan bandhig. Duruufahaas awgood, Imaaraadku waxay ku tallaabsadeen shaqaalaynta ilaalada amniga ee shaqooyinka Expo 2020. Maalmahan gobolka GCC wuxuu ugu dambeyntii bilaabayaa inuu maareeyo shaqooyin aad u wanaagsan oo loogu talagalay safarada. Gaar ahaan leh shirkadaha Abu Dhabi iyo Dubai. Waxaa intaa dheer, bandhigga 2020 wuxuu soconayaa shirkadaha cusub waxay bilaabeen barnaamijyo gaar ah oo ajnabiya. Dhinaca kale, waa inaad sidoo kale fiirisaa shirkadaha shaqaaleynta. Bogga Careerjet ee Dubai iyo Websaytka shaqooyinka Monster Gulf. Runtii aad ayay muhiim u tahay inaad codsato CV-gaaga.
Shaqada Bouncer ee Dubai
Shaqooyinka amniga ee Dubai ee Bouncer-ka ayaa ah kuwa ugu caansan. Magaalada Dubai Shirkaddu waxay siisaa liis buuxa ee shaqooyinka amniga ee Dubai. Marka, iyadoo tan maskaxda lagu hayo, kooxdeena ayaa maareynaysa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan sida loo helo shaqo sida qof amniga ah oo ku sugan Dubai. U fiirso naftaada sida shaqo looga helo qaybta amniga. Sababtoo ah ilaaliyaha amniga Dubai, shaqada iyo mushaharka aad ayay ugu wanaagsan yihiin Imaaraadka Imaaraadka Carabta.
Xirfadda kubadda cagta ee Imaatinka Imaatinka si fiican ayaa loo bixiyaa inta badan. Laakiin waxaad u baahan doontaa inaad heshid khibrad fiican. Intaa waxaa dheer oo eegaya wanaag iyo tareenka jimicsiga. Sababta oo ah qaar ka mid ah goobaha habeenkii ee ku yaala Imaaraadka Imaaraadka Carabta ayaa raadinaya gargaar. Gaar ahaan shirkadaha amniga ee dibada. Mid ka mid ah waxa ugu weyn ee xirfaddan leh waa ilaalinta hantida shirkadda. Caawinta shaqaalaha maxalliga ah iyadoo la ilaaliyo jawi aamin ah oo aamin ah in muddo ah.
Sida bouncer ah, ma noqon doontid calooshood u shaqeystayaal. Ilaa iyo inta aad si sharci darro ah ugu dhaqmi doontid difaaca. Waxaad ubaahantahay inaad hubiso, waxaad ilaalin doontaa amarka nolosha iyo hantidaada aaminay waqtiga oo dhan. Hay'addu waxay qaadaysaa talaabooyin sax ah macaamiisha aan la fileyn. Warbixinno cusub waa in la siiyaa si faahfaahsan dhacdooyinka looga shakiyo dhacdooyinka naadiyada. Intaa waxaa sii dheer, roondeynta aaga si aan kala sooc lahayn ama si joogto ah u dhisid iyo dhismeyaal
Inta ka horeysa naadiga, way xirnaan doontaa. Intooda badani waa la garaacay Shaqada Dubai waxay ku lug leedahay la socodka iyo xakamaynta marinka laga soo galo dhismaha albaabada iyo irdaha baabuurta. Waqtiga habeenkii, shaqadu waxay noqon kartaa mid aan badneyn. Laakiin ilaalada kale ee ilaalada ayaa ilaalin doona nidaamyada digniinta ee CCTV. Inta badan kaamirooyinka iyo nidaamka qalliinka ayaa ku daawan doona 24h maalin oo lagu ogaanayo xaaladaha degdegga ah.
G4S waxay ugu fiican tahay xirfadaha ammaanka ee UAE
G4S waa shirkadda ugu horreysa adduunka ee amniga nabadgelyada. Mid ka mid ah xalka ugu fiican ee qurbaha. Intaa waxaa dheer, iyagu waa mid ka mid ah loo shaqeeyayaasha adduunka ugu weyn adduunka oo dhan. G4S waa mid ka mid ah shirkadaha ugu wanaagsan Bariga Dhexe shaqada. Sidoo kale waa shirkadda ugu waxqabadka badan G4S oo ku jira liiska Forbes.
Shirkadda G4S waxay bixisaa faa'iidooyin badan. Laga soo bilaabo mushaharka aasaasiga ah iyo gunno lacag bixinta shaqaalahooda. Haddii aad raadinayso ballan aad u ballaaran oo xiiso leh, fursado xirfad leh oo mustaqbalka fog leh. Shirkadda G4S waa adiga. Mid ka mid ah goobaha ugu fiican ee shaqada muddada dheer ee UAE. Tani waa shirkadda aad ka dhigi karto isbeddel dhinaca ammaanka ah Xirfadda Dubai.
Shaqooyinka ammaanka ee suuqa Suuqa Dubai. G4S waa meel aad u fiican adiga gaar ahaan haddii aad raadineyso shaqo banaan oo banaan. Iyada oo G4S waxaad si fudud u arki doontaa kala duwanaanta iyo kala duwanaanshaha fursado shaqo meel kasta oo shirkado kale ah.
Kooxda Nabadgalyada Koowaad
kale shirkad danaynaysa waa Kooxda Amniga Koowaad. Shirkadani si xoogan ayey u shaqaysaa Aqoonsiga Bariga Dhexe. Kooxdii ugu horaysay ee amniga badankeeda waxay ku xiran tahay inay shaqaaleyso dad cusub. Shirkaddu waa rumaysantahay iyo horumarinta nidaamka oo dhan. Qaar ka mid ah dadka ajnebiga ah ayaa la shaqeynaya shirkadan iyo bedelida jawiga amniga ee Dubai. Sidaas darteed haddii aad raadineyso shaqooyinka ammaanka ee Dubai. Kooxdii ugu horaysay ee amniga ah ee maamusha dad gaar ah. Oo ha noqotee mid iyaga ka mid ah xitaa sida ajinebiga cusubi runtii waa u qalantaa.
Kooxdii ugu horaysay ee amniga waxay leedahay hawlgalka ugu muhiimsan. Caawi Bariga Dhexe sababtoo ah shirkadu waa inay bixiso jawi shaqo. Shirkadan, waad awoodaa maareyso himilooyinka shaqsiga shaqsiyeed. Inta badan shaqaaluhu waxay horumariyaan saldhigooda xirfadeed waxayna ku dhiirigeliyaan koritaanka shaqsiyadeed. Amniga ugu horeeya Xirfadda kooxdu waa mid suurtagal ah Dubai. Sidoo kale, barnaamijyada horumarinta waxaa lagu taageeraa suuqyo dhowr ah oo ku yaalla UAE.
Shirkadan ayaa si fiican u shaqaynaya si loo hubiyo in dalxiisayaasha Imaaraadka ah la badbaadiyo. Kooxahan amniga ee ugu horeeya waxay noqdaan shirkada ugu heer sareysa gudaha tababarka iyo xarumaha cusub. Isla mar ahaantaana, Way u furan yihiin dhammaan dadka cusub gudaha shirkadda iyo shaqaalaha cusub. Shakhsiyaadka maamulaya qandaraasyo dhowr ah oo ka socda ururka. Ujeedada maareynta qandaraasyada qandaraasyada ee Imaaraadka, shirkad samaynta shaqaalahooda hab cusub ee horumarinta shaqadooda. Ugu dambeyntii, shirkadani aad bay ugu faantaa dhaqankeena shirkadda.
Fadlan email ugu dir qaybta HR ee ku soo lifaaqan nuqulka CV-gaaga info@firstsg.com.
Adeegyada Hawk Security, shirkad kale oo shaqaaleynaysa Imaaraadka. Xaaladahaas oo kale, fursadaha shaqada ayaa u furan dadka ajnabiga ah. Goobta shirkadan waxay ku taal Imaaraadka Imaaraadka Carabta. Shirkad aad u wanaagsan si ay u shaqeeyaan sida dalxiis. Maxaa yeelay shirkaddu waxay leedahay qaab aad u kala duwan oo kala jaad jaad ah. Gaar ahaan loogu talagalay shaqaale cusub oo jooga Dubai, Sharjah iyo Abu Dhabi.
Shirkadda amniga ee garabka ayaa leh meelo kala duwan meelo ka tirsan gudaha UAE. Dad badan ayaa shaqeeya guud ahaan Imaaraadka Carabta oo shaqo ka raadinaya Dubai. Guud ahaan, haddii aad tahay xiiso u qabaan inay shaqeeyaan by mid ka mid ah ugu shaqeeyayaasha ugu sareeya ee warshadaha ammaanka. Shirkadda Amniga Hawk waxay awoodi doontaa inay kaa caawiso sidii aad u kobcin laheyd khabiirka amniga.
Waxaa jira waxtar badan oo aad heli karto oo ka socota shirkadda amniga Hawk. Tan iyo markii aad ku biirtay tababarka iyo Bilaabidda xirfaddaada xirfadeed shirkadan. Dhab ahaan, waxaad isku arki doontaa qorshe wanaagsan oo ficil ah. Waa inaad timaadaa oo aad ku biirtaa Adeegga Xawaaladaha Hawk ee Imaaraadka Carabta. Sidaas shirkadani waa aad u fiican ee u soo guurista Dubai.
Dib u dir resign E-mail: hr@hawksecurityservice.com
Adeegga Badbaadada Gaarka ah
Adeegyada Badbaadada Badbaadada ee Badbaadinta Ilaalinta waxay bixiyaan xalal badan oo amniga ah. Waxaa lagugu dari karaa ammaankaaga Xirfadda Dubai ama Abu Dhabi. Guud ahaan, Adeegga Badbaadada Gaarka ah waa oo ay ansaxisay Nidaamka Ilaalinta Nidaamka Ilaalinta ee Booliiska Dubai (DPS). Shirkadda ayaa loogu talagalay inuu noqdo kan ugu weyn dalka Imaaraadka Carabta. Iyada oo leh Awoodda Amniga Ciidamada waxaad shaqeyn kartaa shaqaale ahaan ama kormeere.
Dhinaca xun, markaad tagto kulan aad la leedahay shirkadan. Aad u baahan tahay inaad buuxin shuruudda ugu yar ee lagu noqdo shaqaale. Adeegga Badbaadada Gaarka ah wuxuu leeyahay Muwaadiniin Caalami ah iyo macaamiil maxalli ah oo ka socda Imaaraadka Carabta. Waxaad heli kartaa fursad shaqo gudaha a warshadaha kala duwan. Mustaqbalka fog, waxaad ka dooran kartaa tafaariiqda, maalgashiga ama xitaa shaqeynta sugida amniga. Ilaa hada shirkadu waa shaqaaleyneysaa shirkadaha martigelinta. Meelaha hore, shirkadaha kale ee ganacsiga iyo qaybaha warshadaha waxay la shaqeeyaan Adeegga Badbaadada Badbaadada.
Waxay sidoo kale shaqaaleysiinayaan shaqooyinka CCTV ee Dubai
Halkan waa iskuxir meeshii aad iska diiwaan gelin lahayd http://guardforce.ae/career/
Shirkadda Dubai City ayaa hadda bixinaysa Tilmaamaha wanaagsan ee Shaqooyinka Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Dubia way soo baxday. Marka, adiga oo tan maskaxda ku heysa, waxaad hadda heli kartaa tilmaamo, talooyin iyo shaqaalaynta Imaaraadka Carabta oo leh luqaddaada.